Fiaraha-miasa: tokony hifandanja ny vokatra ho azo - ewa.mg
Fiaraha-miasa: tokony hifandanja ny vokatra ho azo
News - Fiaraha-miasa: tokony hifandanja ny vokatra ho azo
tsinjo tsikelikely fa mitombo miandalana ireo vahiny mitady
fiaraha-miasa amin’ny tontolon’ny zavakanto malagasy. Anisan’izany
ny hira, ny dihy, ny tsidi-bohitra, ny fanaovana sarimihetsika
fanadihadiana, sns. Endrika tsara ho an’ny kolontsaina sy ny
zavakanto malagasy ny fisian’ireny tetikasa ireny… Saingy, rehefa
tomorina akaiky, fantatra sy azo tsapain-tanana ary mivaingana
mazava ve ny fiantrainkany eo amin’ilay mpanakanto na ny zavakanto
malagasy? Anisan’ny firenena maro tetikasa i Madagasikara raha eo
amin’ny zavakanto sy ny kolontsaina. Tsy voatery miankina amin’ny
fanjakana izy ireny. Ny ankamaroany aza, ilay mpanakanto na ilay
fikambanana na ireo sehatra samy hafa no mahita ny fifanarahana sy
manatanteraka izany. Ny fanjakana rahateo, efa nilaza fa hitana ny
anjara toeran’ny mpanamora amin’ny fanatanterahana ny tahaka
Amin’ny ankapobeny, manantombo
kokoa hatrany ny tombontsoa azon’ireo vahiny tompon’ny vola sy ny
fitaovana raha oharina amin’ny an’ny Malagasy tompon’ny kanto.
Indraindray aza, mahatsiaro ho voambaka ny tontolon’ny zavakanto sy
ny kolontsaina malagasy. Mila manova paikady mba tsy
hitohizan’izany intsony. Hampianarina ny mpanakanto na ireo
mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto hahay momba ny
fifampiraharahana. Hampahafantarina azy ireo ihany koa ny lanjan’ny
kolontsaina sy ny zavakanto malagasy. Fantatry ny vahiny io ka izay
no mahatonga azy ireo hanatanteraka tsy tapaka tetikasa eto
L’article Fiaraha-miasa: tokony hifandanja ny vokatra ho azo a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra fampandrosoana ho an’ny fokonolona monina mipetraka manodidina ny valanjavaboary 43 ny tetikasa maro natao tantsoroka miaraka amin’ny Madagascar National Parks tao anatin’ny 10 taona. 10 taona ny nitondran’ny Madagascar National Park (MNP) ny anarany izay Association nationale pour la gestion des aires protégées (Angap) teo aloha. Betsaka ny ezaka natao ho fanomezan-danja ny fampahafantarana ny harena misy eto amintsika ao anatin’ny valanjavaboahary 43 tantanan’ny MNP manerana ny Nosy. Na teo aza ny olana samihafa niseho, nitombo avo roa heny ny isan’ny mpitsidika ny vala satria nahatratra 190 812 ny taona 2017 raha 135 630 ny taona 2008. Nitondra fampandrosoana ho an’ny tanàna manodidina ny fisian’ny vala ary atao ao ny asa rehetra. Niroborobo ny asa fitarihan-dalana, nivoatra nanaraka ny toetrandro. Porofon’izany ny fanitarana ny trano fandraisam-bahiny ao Andasibe sy ao Ranomafana ary fitomboan’ny isan’ny mpitari-dalana ho 100%. Vokatry ny ezaka, nahazo fankasitrahana tamin’ny fanasokajiana ho site Ramsar sy « reserve biosphère » ny vala efatra. Fiaraha-mitantana Mampiavaka ny fiasan’ny MNP ny fiaraha-mitantana miaraka amin’ny Vondron’olona ifotony monina manodidina ny valanjavaboary. Tanjona ny hampandray anjara ny fokonolona amin’ny alalan’ny komity ifotony ho an’ny vala (CLP) sy ny komity manao tantsoroka ny valanjavaboary (Cosap). Nisy ny fametrahana fotodrafitsa mitondra voka-tsoa mivantana ho an’ny vahoaka toy ny tohodrano, ny sekoly, ny fampidirana rano madio fisotro, ny fametrahana tobim-pahasalamana… Nahatratra 80 ny vita tao anatin’ny 10 taona. Ankoatra ny fotodrafitrasa, 28 000 ny tokantrano nisitraka tetikasa madinika ka novatsin’ny MNP vola ny fanatanterahana. Tao ny fiompiana, ny fanaovana asa tanana, ny voly legioma sy anana. 361 ny fokontany nahazo tombontsoa mivantana vokatry ny tetikasa fanohanana ny fampandrosoana mifototra amin’ny sosialy sy ny tontolo iainana ho fanonerana ny vola teo aloha tsy niditra tamin’ireo mponina rehefa nijoro ny vala. Vola 3 miilara Ar nanamboarana lalana Ho fampandrosoana ny fampihodinana ny vala, nanokana vola mitentina 3 miliara Ar ny MNP nanamboarana ireo lalana sy tetezana ahafahan’ny mpitsidika mandeha amin’ny vala sivy. Amin’izao fotoana izao, 1 000 ny mpiasa mampihodina ny asa fikarakarana ny vala sy ny fiarovana ny harena ao anatiny. Vonjy A.
Ny asabotsy lasa teo, na­nomboka nampiasa ny fitaovam-pitiliana GenExpert momba ny covid-19 ny teknisianina ao amin’ny distrikan’i Taolagnaro, araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny fahasalamana, omaly. Hatramin’ny omaly, 37 ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus, ora iray aty aorian’ny fijerena ny singa nalaina no mivaly ny fitiliana. Ireo olona efa misy soritr’aretina no ampiasana ny ny fitaovana GenExpert noho ny antony teknika. Misy soritr’aretina avokoa izy 37 fa tsy ahitana tranga sarotra kosa. 27 raisina an-tanana eny amin’ny centre manokana fa any an-trano ny 10 ambiny. Misy fanadihadiana mialoha ny fanekena ny fitsaboan-tena an-trano. Fan­tarina ny toerana misy ilay marary na mitokana na amin’ny faritra be mponina. Manana efitra maro ve izy ireo hahazoana mihiboka mitokana ary firy ny olona iray trano. Arahi-maso isan’andro ireo mijanona an-trano ary manana ekipa ny fari-piadidiam-pahasalamana misahana izany. Hatra­min’izao, ireo mpiasan’ny fahasalamana miankina amin’ny fanjakana no mikarakara ny marary sy ny fitsaboana ary ampy ny fitaovana enti-miasa, hoy ny nambarany. Momba ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, hi­verina hiditra an-tsehatra in­dray ny mpitandro filaminana fa mitady ho goragora ny fanarahana ireny eny anivon’ny vahoaka. Nisy ny fivoriana nijerena manokana ny fepetra hanamafisana ny efa mihatra hatramin’izay noho ny fahamaroan’ny tranga vaovao miseho ao anatin’ny faritra Anosy.Vonjy A.L’article Taolagnaro : 10 ny mararin’ny Covid-19 mitsabo tena an-trano a été récupéré chez Newsmada.
Mpandeha manodidina ny dimy no voalaza fa naratra tamin’ny fivadihan’ity taksibe iray tetsy Soanierana, omaly maraina. Hianatsimo ho any Ambohijanaka io fiara mpitatitra olona io no izao tra-doza izao. Nivily lalana sy nandona vatobe no fantatra fa nampivadika ny fiara. L’article Fivadihana taksibe est apparu en premier sur AoRaha.
Efa ho herintaona no tapaka ny lalana eny amin’ny fokontany Soanierana III i Cité Gare. Voatery miodina any Tsimbazaza na Ankadimbahoaka ny fiara na ny “taxi be” ary mandeha tongotra amin’ny fiakarambe ireo mponina. Raha ny hita teny an-toerana dia nihotsaka vokatry ny orana tamin’ny fotoam-pahavaratra farany teo ny lalana mampitohy an’i Soanierana ambony sy eo amin’ny Descour Ankadimbahoaka. Noho tsy fisian’ny fanamboarana dia niitatra izany ka lasa lavaka be. Namaly ny fitarainan’ny mponina sy ny antso nataon’ny mpanolontsainan’ny tanana an’ Antananarivo Renivohitra ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina. Ka handray an-tanana ny fanamboarana io lalana io miaraka amin’ireo matihanina amin’ny fanamboaran-dalana. Nisy ampahany tamin’ny asa no natomboka tamin’ny alalan’ny hetsika “tagnamaro, andron’ny olom-pirenena” izay natao ny sabotsy 17 aogositra 2019 lasa teo. Nifandrimbonan’ny mpiasan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina ny fampiakarana ireo vato malao tao anaty lavaka. Raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontany, Razafindramanitra Emmanuel dia olona 26 avy amin’ny tokantrano enina no traboina vokatr’ity fihotsahana ity satria nibosesika tany amin’ny trano fonenan’izy ireo ny ranon’orana. Zava-doza hoy izy no hitranga raha mbola tratry fahavaratra manaraka io lalana io ka isaorana ny ministera nanomboka ny asa. Nomarihany fa efa nandefa fitarainana teny anivon’ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra sy ny ministera misahana ny fanamboaran-dalana ny fokontany. Nilaza kosa ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana fa roa volana ny faharetan’ny fanamboarana ary nampanantena ny tenany fa hovitaina hatramin’ny farany izany kanefa vao maika tsara raha misy tomponandraikitra hafa maniry ny hanamboatra izany. Ankoatra teny Soanierana, nanamarihan’ny ministera foibe ny hetsika tagnamaro andiany faha-enina ny asa fanadiovana ny teny Ambodifilao, Tsaralalana ary Petite Vitesse. Lynda A. sary Cet article LALANA NIHOTSAKA ETSY SOANIERANA: Natomboka tamin’ny “tagnamaro” ny asa fanamboarana est apparu en premier sur déliremadagascar.
Mitohy hatrany ny ady. Tsy mijanona na ajanona izay, raha tsy resy tosika ny valanaretina Covid-19: fandresena. Mby aiza? Ny faritra Analamanga no ivon’ny valanaretina amin’izao. Nahoana? Lazaina matetika ny hoe fahavalo tsy hita maso no iadiana, mora mifindra, tsy mifidy olona toerana… Na eo aza ny hoe mety mifindra amin’ny alalan’ny rivotra ny tsimokaretina, ny olona ihany no tena mitondra sy mamindra azy. Mbola hitadiavan’ny sehatra iraisam-pirenena porofo ny hoe entin’ny rivotra ny tsimokaretina: raha marina, tsy ampy ny fihibohana fotsiny na mila diovana ny rivotra? Na ahoana na ahoana, tsy hita maso ny fahavalo. Na mety mipetraka amin’ny toerana rehetra aza izany, ny olona ihany no tena mitondra sy mamindra ny tsimokaretina. Izay no iarovan-tena amin’ny fihibohana, fanaovana saron-tava, fanajana ny elanelana iray metatra, fanasana tanana matetika… Averimberina hatrany ny hoe tsy hita maso ny fahavalo, mora mifindra, tsy mifidy olona… Hita maso kosa ny olona mifanerasera amin’ny tena: iarovan-tena, iarovana ny hafa koa. Izay koa no ampihenana, araka izay azo atao, ny mety hisian’ny fifampikasohana na fifaneraserana akaiky sy mivantana. Tsy fiampangana fa fanahiana sy fahamalinana, heverina ho mety mitondra tsimokaretina ny hafa rehetra. Izay no iarovan-tena. Tsy fantatra koa raha mety mitondra tsimokaretina ny tena, na tsy misy soritr’aretina aza raha tsy atao fitiliana. Amin’izany, aleo mitandrina miaro ny hafa manodidina. Fifampitsinjovana izany ny fiarovan-tena: manahy olona mety mitondra tsimokaretina ny tena sady ahin’ny olona mety mitondra izany koa. Mandringa ary tsy mahomby ny fiarovan-tena amin’ny ady atrehina, raha tsy miara-miatrika amim-pifampitokisana ny rehetra fa horesena ny fahavalo iombonana. Inona no tena mampitombo isa ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina ho an’ny faritra Analamanga? Eny, na hoe mangatsiaka aza ny andro: manome vahana azy ho haingam-pitombo, matanjaka… Mila ho an’ny tsirairay ny daholobe, ary ny tsirairay ho an’ny daholobe. Izay no handresena?Rafaly Nd.L’article Ny olona ihany no tena mitondra sy mamindra… a été récupéré chez Newsmada.
Mampanahy ny ain’i Nassir Sivjee, ilay Karàna mizaka ny zom-pirenena Frantsay, tale jeneralina orinasa lehibe iray eto an-drenivohitra, nisy naka an-keriny tamin’ny alarobia 14 novambra lasa teo teny Androhibe. Mila mihinana fanafody isan’andro amin’ny ora voafetra ity rahalahin’ny tompon’ny tranombarotra lehibe fivarotana vata fampangatsiahina sy fahitalavitra ary milina isan-karazany eny Tsaralalàna ity, araka ny fantatra. Matetika ihany koa izy no manara-maso ny fahasalamany any ivelany. Izany indrindra no nahatonga azy tsy maintsy mihinana an’io fanafody io isan’andro amin’ny ora voatondro. “Fanafody tsy misy eto Madagasikara ihany koa izy io fa tsy maintsy afarana any ivelany”, araka ny fantatra. Tamin’ny fotoana nitrangan’ny fakàna an-keriny anefa dia tsy nanana an’io fanafody io tany aminy i Nassir Sivjee. Noho izany,mampanahy mafy ny ain’ity Karàna mpandraharaha ity. Raha tsiahivina dia herinandro talohan’ny nakan’olona an-keriny azy dia niharan’izany ihany koa i Riaz Hassim, tale jeneralin’ny Makiplast, ary efa navo­tsotr’ireo jiolahy tamin’ny alakamisy alina teo. Tamin’ny taona 2015 ihany koa no efa niharan’izany i Rafik Jaffaraly, izay rahalahin’i Nassir Sivjee, teny amin’ny kianjan’ny sekoly Saint-Michel Amparibe. Tamin’ny taona 2014 dia efa nisy Karàna iray nisy naka an-keriny toy izao. Tsy maintsy mampiasa fanafody isan’andro anefa izy saingy tsy nanana izany tamin’ny fotoana nitrangan’ny fakàna an-keriny. An-taonany maro no tsy hita izy ary tsy fantatra na maty na velona. L’article FIHINANANA FANAFODY ISAN’ANDRO :: Ahiana mafy ny ain’i Nassir Sivjee, ilay Karàna nisy naka an-keriny est apparu en premier sur AoRaha.
Taorian’ny fihaonana teo anivon’ny Copries, nandraisana toromarika avy amin’ny minisitry ny Fampianarana ambony ho amin’ny tetiandron’ny fampianarana ambony ho an’ny taom-pianarana telo nifanesy, manao antso avo ny sojaben’ny departemantan’ny Degmia, amin’ny onversiten’ i Barikadimy- Toamasina, profesora Razanakolona Diny. Nambarany fa hitohy tahaka ny isan’andro ny fampianarana ary efa hofaranana ihany koa ny taom-pianarana 2018- 2019. Antsoina, araka izany, ireo mpianatra rehetra hanatitra ny dikan’ny taratasim-panadinana “copie” any aminy. Niantso ireo tokony hisoratra anarana, indrindra ireo manomana sy “Licence” sy “Masters” ny tenany. Hifarana ny 30 septambra ho avy izao ny fandraisana ny antontan-taratasim-panadianana, hivoaka aorian’izay ny vokatra ary hikatona ny taom-pianarana 2018-2019. Hiditra ny 2 novambra ny taom-pianarana 2019-2020, izay hovitaina anatin’ny fotoana fohy, manodidina ny fito volana. Hirosoana aorian’ izay ny taom-pianarana 2020-2021. Ho an’ny sampam-piofanana toekarena, lalàna, fitantanana, hisy ny fitsapam-pahaizana ho an ireo mpianatra hiditra taona voalohany. Misokatra koa ny fampiofanana ampitain-davitra ho an’ ireo efa miasa na tsy afaka hanatrika fampiofanana an-dakilasy, na ireo monina ivelan’ i Toamasina. Afaka misoratra anarana avokoa izy ireo ary hifarana ny 30 septambra izany.Fampiofanana arakasaHo an’ny fampiofanana arakasa, ho an’ ireo telo taona taorian’ny nahazoana bakalorea teo amin’ny lalampiofanana lalàna sy matematika, mifarana ny 30 septambra ho avy izao ihany koa ny fisoratana anarana “master professionnel en marchés publics”, izay mety hazahoana toerana maha talena fitantanana na izay mitovy lenta aminy eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana. Toy izany ihany koa ny fampiofanana fitantanana seranan-tsambo sy ny fampitaovana, efa hisokatra manomboka ny 8 oktobra izao ny fisoratana anarana. Ho an’ ireto farany, voalaza fa matotra ny fiaraha-miasa eo amin’ny PRMP, Smmc ary efa vita ihany koa ny fifampiresahana tamin’ny Spat. Hanampy ny Degmia eo amin’ny fiaraha-miasa hanatsarana ny fampiofanana hahazoan’ny mpianatra Master izy ireo.Tsy ho ela ny fivoahan’ny andiany eo amin’ny Master 2 anivon’ny departemanta Degmia.Sajo L’article DEGMIA-Toamasina: hovitaina anatin’ny fito volana ny taom-pianarana 2019-2020 a été récupéré chez Newsmada.